dimanche, 14 mai 2017 22:29
“Village Touristique” - Mahajanga : Tonga nanala devoly ny Fiangonana Apokalipsy
Taorian'ny voina an-dranomasina namoizana ain'olona teny amin'ny Village Touristique Mahajanga herinandro vitsy lasa izay, dia nidina teny an-toerana ireo mpino avy amin' ny Fiangonana Apokalipsy eto an-toerana notarihin'ny pastora Andriatsarafara Arthur nandroaka devoly.
Asan'ny maizina ary asan' ny devoly no handraisan'izy ireo ny fahafatesan'olona nisesisesy tamin'ity toerana fitsangatsanganana ity ka mila diovina amin'ny alalan'ny vavaka.
Harena voajanahary nomen'Andriamanitra ny ranomasina ka tokony hisitraka izany malalaka ny olombelona. Mila miantso an'Andriamanitra izay namorona azy araka izany mba hamaha ny olana sy handresy ny asan'ny maizina. Io no fanazavana nentin'ity antonkom-pivavahana ity mahakasika ny olana momba ny Village Touristique.
dimanche, 14 mai 2017 18:53
Fianarantsoa : Nitombo ny isan'ny mpiadina BEPC sy CEPE teto amin'ny Cisco
Niatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena ny mpianatra mpiadina BEPC ny herin'andro teo. Mpiadina miisa 3080 amin’ireo 4429 voasoratra anarana no niatrika io fanadinana ara-panatanjahantena io teto amin'ny Cisco Fianarantsoa.
Toerana 2 no nanatanterahana izany dia tao amin'ny kianjan'ny CSFX Ambatomena sy teny amin'ny CRINFP Mahazengy.
Niakatra io isan'ny mpiadina io, hoy ny lehiben'ny faripiadidiam-pampianarana eto an-toerana tahaka ny an'ny mpiadina CEPE izay mitontaly 5044 tamin'ity taona ity.
dimanche, 14 mai 2017 18:52
Fifaninana ady totohondry : 16 mianadahy no niaro ny voninahitr’Alaotra Mangoro
Nanana solontena 16 mianadahy ny ligy Alaotra Mangoro niatrika ny fifaninanam-pirenena tamin’ny ady totohondry izay notontosaina tao Antananarivo nanomboka ny 12 mey teo.
“Tanjona ny hitazomana ny lazan’ny faritra tamin’ireo vokatra tsara azo teo aloha”, hoy i Haja Majarin, filohan’ny ligy.
Marihina fa efa tompondaka lefitra tamin’ny fifaninana iraisam-pirenena izay notontosaina tatsy La Réunion ny mpikatroka ady totohondry avy aty Alaotra Mangoro ny taona 2012.
dimanche, 14 mai 2017 18:28
Fifamoivoizana : Manararaotra manao taingim-be ny mpitatitra eto Sambava
Tena ahitana izany ny lalam-pirenena RN5A Sambava –Vohémar, tsy mifidy io na taxi Bajaj, na taxi ville, indrindra ny taxi brousse, hany ka mitera-doza indraindray.
Miditra ny fotoam-piotazana lavanila ny aty an-toerana amin'izao, ka mifanaretsaka ny mpividy sy mpijirika.
dimanche, 14 mai 2017 17:48
Mahajanga : Telo mianadahy saron’ny Polisy niaraka tamin’ny rongony 16 fatorana
Avy any Antsohihy ireto rongony ireto no saron’ny Polisy ny harivan’ny alarobia teo teny amin’ny toby fiantsonana rehefa nahazo loharanom-baovao avy amin’ny tsara sitrapo.
Avy hatrany dia nosamborina ny mpamily sy ny mpanampy azy ary zazavavy kely iray 16 taona ary mbola mpianatra, izay nitsena ny entana.
Karohina ihany koa ny renin’ilay zaza raha ny fanazavan’ny Kaomisera Rakoto Thomas Richard.
dimanche, 14 mai 2017 17:34
Halatra lakolosy tao Voloina Maroantsetra : Ben’ny tanàna iray nidoboka am-ponja, tovolahy iray 15 taona maty voatifitry ny Zandary
Nivadika sakoroka sy fitsaram-bahoaka ny fahaverezana lakolosy nitranga tao amin’ny EPP Voloina Maroantsetra ny herinandro lasa teo. Tratra tao an-tranon’ny Ben’ny Tanàna ao an-toerana ilay lakolosy nandritra ny fisavan’ny Zandary ny tranony. Mbola nahitana lavanilina halatra sy vola an-jatony tapitrisa ihany koa tao an-tranony, ka naparitaky ny olona teny an-tokontany.
Tezitra ny olona ka mitaky ny hampiharana fitsaram-bahoaka amin’ny Ben’ny Tanàna. Tsy nanaiky anefa ny Zandary nanao ny fisamborana, ka raikitra teo ny sakoroka ka nahatonga ilay tovolahy 15 taona maty voatifitry ny Zandary. Nodoran'ny olona ny moto sy ny fiaran'ny Ben'ny Tanàna.
Namoaka didy savaranonando mitazona am-ponja vonjimaika an’ingahy Ben’ny tanàna, izay avy amin’ny antokon’ny mpitondra, ny Tonia mpampanoa Lalàna ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Maroantsetra, rehefa natolotry ny Zandary ny Fampanoavana ny raharaha.
dimanche, 14 mai 2017 17:17
Mahanoro : Vola sandoka mitentina 51 tapitrisa Ariary saron’ny Polisy
Tovolahy iray 26 taona avy ao Masomeloka no nahatrarana ireo vola sandoka ireo, izay nataony tao anaty sakaosy iray. Tonga dia nibaradaka izy vao tratran’ny Polisy ka nanoro ireo namany roa lahy, voalazany fa mpanamboatra sy mpanaparitaka ireto vola sandoka ireto any an-toerana.
Tsy hita anefa ireto farany ka mitohy ny fikarohana azy ireo, toy izany koa ny fitaovana fanamboaran’izy ireo izany.
Natolotra ny Fitsarana ao Vatomandry ny zoma teo ity tovolahy nahatratrana vola sandoka ity.
dimanche, 14 mai 2017 17:07
Kidnapping: Le fils du propriétaire de la City kidnappé par 12 gars armés
Yanish Ismael, le fils de Danil propriétaire du groupe SMTP (ABC, La City) a été kidnappé par 12 gars armés, ce matin vers 10h30, devant sa famille à la sortie d'un enterrement du cimetière d'Ilafy.
les 12 hommes armés ont tirés pour destabiliser la foule. Un Gendarme qui a assuré la sécurité de la famille a été blessé.
Les hommes cagoulés et armés de kalachnikov ont pris la fuite par une mazda noire.
dimanche, 14 mai 2017 14:03
Mahajanga : Hiady amin’ny fidorohana zava-mahadomelina ny tanora Advantista
Handray an-tanana ireo tanora mifoka sy misotro ny zava-mahadomelina ny fikambanan’ny tanora avy amin’ny Fiangonana Advantista eto Mahajanga. Tanora 200 mahery no kendren’izy ireo homena fitsaboana hialana amin’ny fiankinandoha amin’ny zava-mahadomelina.
Maimaimpoana ny fitsaboana ataon’ireo tanora Advantsita ao anatin’ny hetsika « Mahajanga tsy mifoka sigara » izay haharitra enina andro amin’ny toerana misy ny Fiangonana ao amin’ny Fokontany Manga handrasaina ireo tanora vonona hiala amin’ny zava-mahadomelina rehetra.
dimanche, 14 mai 2017 14:01
Fianarantsoa: Lavo i Vilk, dahalo raindahiny any Amoron'i Mania
Ny andron'ny alahady 7 mey teo no nitrangan'izany tany amin'iny faritra iny. Izy io no fantatra fa nihantsy ny mpitandro filaminana tao anatin'ny herinandro maromaro izao.
Voatifitra nandritra izany fifandonana izany ny miaramila iray, ary namoy ny ainy.